Itoobiya: Ciidan loo diray Tigreegga, Internet-ka iyo Isgaarsiinta oo la jaray | KEYDMEDIA ONLINE
Itoobiya: Ciidan loo diray Tigreegga, Internet-ka iyo Isgaarsiinta oo la jaray
Xisbiga TPLF ayaa awoodda siyaasadeed iyo mida Militeri ee dalka Itoobiya gacanta ugu jirtay ku dhawaad 30 sano kahor inta uusan Abiy Axmed uu xukunka la wareegin 2018-kii.
ADDIS ABABA - Itoobiya ayaa foolanaysa dagaal sokeeye, kaas oo laga cabsi qabo inuu ka billowdo gobolka dhanka waqooyi ku yaalla ee Tigreegga, kadib markii Abiy Axmed uu Ciidamo Militeri u diray gobolka, oo sidoo kalena laga jaray Internet-ka iyo Isgaarsiinta.
Ciidamada Federaalka ayaa ee la geeyay gobolka ayaa ka dambeysay weerar dhawaan lagu qaadey saldhigyo Militeri, kaasoo dowladda Dhexe ku tilmaamay mid Xisbiga TPLF ee maamula gobolka ku doonayo inuu wadanka ku kala gooyo.
Kadib billooyin daan-daansi, TPLF ayaa qabatey doorasho heer gobol ah xili dib loo dhigay doorashadda guud ee dalka sababo la xiriira COVID-19, waxaana tallaabada mas'uuliyiinta gobolka qaadeen horseeday cabsi iyo inuu dalka Itoobiya qarka u fuulo dagaal sokeeye.
Abiy Axmed ayaa sheegay in TPLF ay "qadka-gaduudan kasoo gudubtay", islamarkaana ay dowladiisa kahor-tageyso wax uu ugu yeeray isku-day gobolka Tigreegga looga jarayo dalka Itoobiya. Qomiyadaha intooda badan aan ku qanacsanayn Xukuumadda Addis Ababa.
Dhowr askari ayaa lagu dilay weerarkiii kadhacay Mekele, caasimada waqooyiga gobolka Tigreega iyo magaalada Dansha. Gobolku waa meesha ugu xasaasisan Itoobiya, deriska la ah Ereteriya, oo dagaal dheer oo xuduudeed dhex maray ka hor inta aysan labada waddan nabadda qadan 2018.
Xukuumadda Abiy Axmed ayaa shalay xaalad deg-deg ah gelisay gobolka Tigreegga, taasoo socon doonto mudo 6 bilood ah. Abiy Axmed wuxuu sheegay in Ciidamada qaranka ay howlgallo ay ka fulin doonaan gobolka maalmaha soo socda, si ay uga hortagaan khatarta madax-banaanida dalka uga soo wajahan gobolka.
0 Comments Topics: abiy axmed addis ababa itoobiya
Gaalkacyo oo laga billaabay Isticmaalka Lacagta Itoobiya
Warar 6 February 2021 8:37
Qatar oo ku baaqday in la baaro dhalinyaro lagu qalday magaceeda
Warar 30 January 2021 5:30